Izinzuzo ibanga ukufunda ukudlala isiginci
Ithola kwetinsita tekufundza ngaphandle kokuba ukuvakashela isikhungo senziwa Sibonga kungenzeka ukuba ukuthuthukiswa ubuchwepheshe bama-computer. Phakathi abaculi abasha abafuna ukufunda ithuluzi esikhathini esifushane, ethandwa ibanga yokufunda - ngokwesibonelo, ukuze ufunde ukudlala isiginci, akudingekile ukungena esikoleni esikhethekile noma khona izifundo ezibizayo. Kuyinto ngokwanele ukuze ube ikhompyutha futhi intanethi uxhumano. Esikhathini web ungathola eziningi ewusizo zokuqeqesha kanye nolwazi yangemuva ezengeziwe.
Izici ibanga yokufunda isiginci ukudlala
Ukuze kude ukufunda ukudlala isiginci kwaba ephumelela kunazo, udinga ukubhala UFUNDA Isheduli enhle ukuqeqeshwa uthole umfundisi ongumakad 'ebona. Popular namuhla kukhona video tutorials of guitarist eziqeqeshiwe futhi uthisha abanamakhono Alena Kravchenko, kabanzi mayelana nombhali kungatholakala kuwebhusayithi esikoleni gitarurok.ru. Kuyinto efiselekayo ukuthi iprogramme zazihlanganisa ukugwema izinto theory kodwa esisebenzayo kuphela njengoba Iculo njalo Isifundo kukuvumela ukuthuthukisa amakhono babuye bahlanganise ulwazi.
Omunye izinzuzo izifundo isiginci akude yikhono ukukhetha isikhathi esikahle kakhulu ukuqeqeshwa. online Yiqiniso, abafundi bakwazi ukuxhumana uthisha nge-Skype, ukuba azibandakanye izingqungquthela isiqophi futhi bathole iseluleko isazi. Thishela ngokuvamile niwuhlele kahle isifundo ngasinye isiginci bese ithumela abafundi ukuba izinto ezengeziwe. Kumele kuqashelwe ukuthi le ndlela kuyinto ukuthuthukiswa insimbi yomculo phakathi ezingabizi kakhulu - ROM nge video tutorials noma umsebenzi kwi-inthanethi ishibhile kuka uya esikoleni noma izifundo ngasese uthisha.
Yini edingekayo ukuze amaseshini ekude isiginci
Ukuze izifundo isiginci inthanethi kwenzeke ngaphandle kwezihibe, kubalulekile ukuba banakekele imishini yezobuchwepheshe - computer kufanele kube serviceable, ne-Internet - ngesivinini. Futhi, udinga ukulanda uhlelo khulula Skype, okuvumela yimuphi umsebenzisi ukuxhuma nabangani nge isiqophi ngokukhululekile. Kuyadingeka ukusungula eliphezulu webcam ukuthi kuzovumela othisha nabafundi ukubona nomunye ngangokunokwenzeka. Ngaphezu kwalokho, uzodinga i-microphone, nezipikha bese-headphone - lezi amadivaysi ukuqeda izinkinga umsindo, engathandeki ikakhulukazi uma ukulalela nokufunda amashuni.
Russian Folk ditties: izingane kanye nabantu abadala. Folk Russian ditties ezihlekisayo
Freddie Isolezwe: A Biography of legend
Uyini blues? izitayela Musical. umculo blues
Popular umculi Ingrid: Biography
I "Brilliant": kwengoma. Soloist "Shining" iqembu. isithombe
Izandla ezivela emabhokisini ebhodlela eplastiki izingane kanye nabazali bazo
Inani amagama amasha: Equilibrium - a ...
Iphele emzimbeni ngoba amantombazane: ukubuyekezwa, indlela, ukuqeqeshwa
Certification we Customs Union. Kanjani ukuze wenze futhi wamukele isitifiketi olulodwa ukuhambisana nemithetho yomsebenzi Customs Union?
Lapho ukuphumula okuhle ukuvakasha Spanish?